Kadib In Uu Shanta Horyaal Ee Yurub Ugu Waa Wayn Ka Soo Shaqeeyay, Carlo Ancelotto Oo Go'aamiyay Horyaalka Ugu Adag Yurub. - Gool24.Net
Kadib In Uu Shanta Horyaal Ee Yurub Ugu Waa Wayn Ka Soo Shaqeeyay, Carlo Ancelotto Oo Go’aamiyay Horyaalka Ugu Adag Yurub.
Carlo Ancelotti ayaa khaas u ah in uu ka soo shaqeeyay shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn ee dalalka Italy, England Spain, Germany iyo France ee kala ah Serie A, Premier League, La Liga, Bundesliga iyo Ligue 1 sida ay magacyada dalalku u kala horeeyaan. Wuxuuna Carlo Ancelotti go’aamiyay horyaalka ugu adag qaarada Yurub.
Carlo Ancelotti ayaa ka soo shaqeeyay kooxaha AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Munich iyo waliba hadda oo uu joogo kooxda Napoli wuxuuna ka mid yahay tababarayasha aadka u kooban ee horyaalo badan isku maray balse waxa uu muujiyay sida ay horyaaladani u kala duwan yihiin.
Carlo Ancelotti ayaa sheegay in horyaal kastaaba uu sidiisa u adag yahay balse waxa uu muujiyay in horyaalka Premier league uu yahay horyaalka ugu adag qaarada Yurub halka uu horyaalka Spain ee La Liga uu ku tilmaamay horyaal saddex kooxood ay iska haystaan.
Carlo Ancelotti oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Horyaalkastaaba sidiisa ayuu u adag yahay. England waxaa jira tartan aad u badan ee halka ugu saraysa miiska kala saraynta, Spain waxaa jira saddex koodood oo cid kasta oo kale ka sareeya”.
Carlo Ancelotti oo hadaliisa sii wata ayaa yidhi: “Talyaaniga kulan kastaaba wuxuu ku adag yahay heerka tatikada. Aan sheegno in horyaalka ugu tartanka badani uu yahay Premier league, madaama oo ay jiraan todoba kooxood oo horyaalka u ordaya”.
Carlo Ancelotti ayaa Chelsea kula soo guulaystay koobka Premier league laakiin xili ciyaareedkii uu koobka difaacan lahaa waxaa laga caydhiyay shaqadii tababaranimo ee Blues kadib markii uu sii joogtayn kari waayay heerkii cajiibka ahaa ee uu koobka ugu soo guulaystay.
Si kastaba ha ahaatee, Carlo Ancelotti ayaa qiray in horyaalka ugu adag ee ugu tartanka badani uu yahay Premier league isaga oo aan soo qaadin magacyada horyaalada France iyo Germany oo ay kooxo gaar ahi iska maamulayeen waqti dheer.
Waa ku saxan yahay
Wuu ku sanxan yahay macalinku